Daawo sawiradda.C/weli Sheekh oo la kulmay Dessalegn kalana Hadlay Qalabeynta Ciidamada | Sagal Radio Services
C/weli Sheekh ayaa Hailemariam Dessalegn uga mahad-celiyay taageerada uu dalkiiisu la garab-taagan yahay Somalia, isagoo ku ammaanay kaalinta xooggan ee ay ciidamada Itoobiya kaga jiraan howlgalka AMISOM.
Sidoo kale, ra’iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu dhiggiisa Itoobiya kala hadlay sidii uu dalka Itoobiya u kordhin lahaa taageerada uu ka siiyo Somalia sida ciidamada. Iyadoo Hailemariam Dessalegn uu ballan-qaaday inuu dalkiisu gacan ka geysan doono sidii ciidamada xoogga Soomaaliya loo tayeyn lahaa oo uu hub iyo rasaas u iibsan lahaa.
“Waxaa dalka Itoobiya nagala dhexeeya iskaashi iyo xiriir qoto dheer. Waxaan uga mahad-celinaynaa sida wanaagsan oo mar walba ay noogu garab-taagan yihiin sidii aan dalka ku gaarsiin lahayn xasillooni. Sidoo kale waxaan uga mahad-celinaynaa sida wanaagsan oo ay uga qayb-qaateen howlgalka AMISOM oo ay ku dareen ciidan badan. Waxaa lagama maarmaan ah in mar walba uu hadafkeennu ahaado inaan sii xoojinno xiriirka labada dal maadaama aan nahay labo dal oo aan kala maarmin,” ayuu yiri ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
Dhinaca kale, ra’iisul wasaaraha Itoobiya, Hailemariam Dessalegn oo isna hadlay ayaa yiri: “Itoobiya iyo Soomaaliya waa isku dan. Itoobiya waxaa danteedu ay ku jirtaa in Soomaaliya noqoto dal xasilloon, waxaana dalkeenna ka go’an inaan dadaal walba ku bixinno sidii Soomaaliya aan uga taageeri lahayn inay gaarto guulaha ay higsanayso. Waxaan ciidanka Soomaaliya ka taageeri doonnaa inay helaan hubka ay u baahan yihiin si ay ula dagaalaan cadowga labadeenna dalba halista ku ah.”
Ugu dmabeyn, labada ra’iisul wasaare waxay sheegeen inay ka go’an tahay inay sii wadaan dadaalka wadajirka ah ee ay ugu jiraan sidii Soomaaliya iyo Itoobiyaba ay u dhabar-goyn lahaayeen Al-shabaab, ayna dalkan ugu soo rogo lahaayeen nabad iyo xasillooni waarta.
Tags Ababa Adis